यस्तो छ विज्ञको सुझाव एक रातमा कतिपटकसम्म सेक्स गर्न सकिन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो छ विज्ञको सुझाव एक रातमा कतिपटकसम्म सेक्स गर्न सकिन्छ ?
तर एक स्वस्थ तथा वयस्क पुरुषले यौनको चरम सुखानुभोगको आधार मा उसको यौनको मात्रा तथा तथा गन्ति गर्न सकिन्छ । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा यो अवस्था दोहो¥याउने गरेको पाइन्छ।
याे पनि पढ्नुस उत्तेजना, हस्तमैथुन र यौन परिकल्पना
अन्य अवस्थामा यो मात्रा कति हुन्छ त रु अण्डकोष अति नै संवेदनशील हुन्छ, औंलाका टुप्पाहरुले अण्डकोषमा बिस्तारै प्रेमस्पर्श गर्नाले, जिब्रोले अण्डकोषलाई स्पर्श गर्नाले र सामान्य सोही अंगलाई हातले हलचल गराउनाले तपाईंले तपाईंको पुरुष पार्टनरलाई चरम उत्कर्षमा लैजान सक्नुहुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस उमेरअनुसार सेक्ससम्बन्धी रुचीमा परिवर्तन
आफ्नो मित्रलाई सधैं सोध्नुस् कि तपाईंलाई उनको स्तन चुस्नको लागि अनुमति छ कि छैन । किनकी त्यो सबैलाई मन नपर्न सक्छ । मञ्जुर भएको खण्डमा जिब्रोको टुप्पोले सुस्तरी स्तनको मुन्टोलाई खेलाउनुहोस् । यो गुद्वार र अण्डकोष बीचको भाग हो । औंलाहरुले उत्सर्गतरालको बिचभागमा हल्का दबाव दिन्स् । फलस्वरुप तपाईंको यौन साथीको लिंगलाई सधैं खडा गरिरहन्छ । तत्पश्चात तपाईंले लामो समयसम्म आफ्नो पार्टनरलाई यौनको मज्जा लिनरदिन सक्नुहुन्छ । एजेन्सी
याे पनि पढ्नुस यस्तो छ सेक्ससम्बन्धी अहिलेसम्मकै अनौठा ५ अध्ययन